Dabley aan la Aqoonsan rasaas ku furay Saldhiga Booliiska Boorama |
Dabley aan la Aqoonsan rasaas ku furay Saldhiga Booliiska Boorama
Guddoomiyaha Boorama, Saleebaan Xasan Xaddi ayaa sheegay in dabley aan la garanayn rasaas ku fureen saldhiga booliska ee magaaladda Boorama kuwaas oo markiiba goobta ka cararay.
Maayarka ayaa sheegay in aanay wax khasaare ah ka dhallan rasaastaasi, isla markaana aan cidna loo qaban dablaydii rasaasta furtay oo markiiba goobta ka cararay.
“Horta Rasaas way dhacday laakiin, sida loo buun-buuninayo may ahayn, Ciidanka Booliskuna kolay wax rideen markay maqleen Shanqadha xabbadda dhinaca kale laakiin wax weyn may ahayn ee markii Xabbadda Ciidanka ay maqleen meesha way ka yaaciin, laakiin, wax weyn oo dhacay oo la odhan karo wax khasaare ah ayaa dhacay ma jirto” ayuu yidhi maayarka Boorama Xaddi oo ka hadlay rasaas lagu furaay saldhiga Boorama.
Maayarka ayaa shacabka reer Borama ugu baaqay inay amnigoodda ilaashadaan, isla markaana la shaqeeyaan laamaha amniga.
Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha reer Boorama ayaa xalay maqlayey rasaas ay is waydaarsadeen CIidanka Booliska ee saldhiga dhexe ee Boorama iyo dabley aan weli la aqoonsan oo rasaas ku furtay saldhiga, taas oo war-war ku abuurtay bulshadda.
Goboladda Galbeedka Somaliland ayaa ahaa goboladda ugu amniga badan, isla markaana ay ka socdaan mashaariic faro badan, kuwaas oo inta badan ay hay’adaha caalamiga ahi ka shaqeeya order Sildalis online cheap, cheap clomid.